October 2020 – " कञ्चनजंगा News "
धेरै मानिसहरु मिम बनाउन चाहन्छन्, तर कसरी र कहाँ बनाउने ? मिम बनाउने उत्कृष्ट ७ एप…
No Comments on धेरै मानिसहरु मिम बनाउन चाहन्छन्, तर कसरी र कहाँ बनाउने ? मिम बनाउने उत्कृष्ट ७ एप…
मिमलाई तपाईं कसरी बुझ्नुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा भेटिने फाल्तु कुरा, जसले हाम्रो समयलाई खाइरहेको छ !तर वास्तवमा मिमकाे अर्थ बृहत छ । यो एउटा व्यङ्गचित्र हो । समसामयिक परिस्थितिको सटिक तथा कलात्मक प्रस्तुति हो । यसले कहिले हाम्रो स्वभावमाथि व्यङग्य गरिरहेको हुन्छ, कहिले हाम्रा समान अनुभूति तथा भोगाइहरुको वर्णन गरिरहेको हुन्छ ।
मिम पढ्न र शेयर गर्न जति रमाइलो हुन्छ, यसलाई बनाउन पनि त्यति नै रमाइलो हुन्छ । धेरै मानिसहरु मिम बनाउन चाहन्छन्, तर कसरी र कहाँ बनाउने उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । आज हामी एन्ड्राेइड प्रयाेगकर्ताका लागि धेरैले प्रयोग गर्ने केही मिम क्रिएटर एपसँग परिचित गराउँदै छाैं । जीएटीएम मिम जेनेरेटर
वाटरमार्क नहुने भएकाले धेरैले याे एप रूचाउने गर्छन् । यसमा नयाँ मिम टेम्प्लेटहरु छन् । यो समय समयमा रिडिजाइन पनि हुने गरेको छ । तर यसका अधिकांश फङ्सनालिटी भने सधै पूर्ण हुन्छन् ।तर यसको नि:शुल्क भर्सनमा विज्ञापनहरु राखिएका छन् । यसको प्रो भर्सनमा विज्ञापन छैन, तर मूल्य १.९५ डलर तिर्नुपर्छ । एन्ड्राेइड प्रयाेगर्ताले यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
मिमेटिक :मिमेटिक एउटा राम्रो मिम क्रिएटर एप हो । यसमा मिम टेम्प्लेटको लाइब्रेरी छ, जसमा एकदमै क्लासिक र नयाँ दुवै किसिमका छन् । तपाईंले आफ्नै फोटो प्रयोग गरेर समेत मिम तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।यसको युआई युजर इन्टरफेस एकदमै सजिलो छ । यो एप पूर्णरुपमा नि:शुल्क छ । तर यसमा केही एडहरु भने छन्, जसलाई तपाईंले हटाउन सक्नुहुँदैन । यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
मिमड्रोइड :मिमड्रोइड पुरानो मिम जेनेरेटर एप हो । यसमा तपाईंले नयाँ-पुराना सबै मिम पाउन सक्नुहुन्छ । यसमा फोटो क्याप्सन तथा गिफ सबै कुरा अपलोड गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यसले एउटा असल मिम बनाउन आवश्यक सबै आधारभूत काम गर्दछ ।
यसमा त्यति धेरै अतिरिक्त फिचरहरु छैनन् । यसको फ्रि भर्सनमा विज्ञापनहरु देखिन्छन् । यसको विज्ञापनरहित सशुल्क भर्सनको मूल्य २.९९ डलर छ । यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । मिम जेनेरेटर:जोम्बोड्रोइडको मिम जेनेरेटर एउटा उत्कृष्ट मिम क्रिएटर एप हो । यसमा विज्ञापन रहितको सशुल्क भर्सन पनि छ । यसमा एक हजारभन्दा धेरै मिम टेम्प्लेट छन् । जसमा तपाईंले राम्रो सर्च, क्याटेगोरी र नयाँ मिमसँगको लगातार अपडेटबाट आफ्नै राम्रो मिम बनाउन सक्नुहुन्छ ।
पुरानो सामसङ फोनको फिक्स हुन नसकेको बगको कारण यसमा एपको एउटा पुरानो भर्सन मात्र चल्दछ । यो एउटा एकदमै राम्रो विकल्प हो ।यदि तपाई अन्य किसिमको मिडिया मिम सर्फ गर्न चाहानुहुन्छ भने यो एपले तपाईलाई भिडीयो गिफ र मिम साउण्डबोर्ड पनि उपलब्ध गराउँछ । यसमा नि:शुल्क भर्सन पनि उपलब्ध छ । सशुल्क भर्सनको भने २.९९ डलर मूल्य रहेको छ । यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नसक्नुहुन्छ ।
आईफन्नी:आइफन्नी नि:शुल्क कमेडी एप हो, जसमा तपाईंले निकै रमाइला मिमहरु बनाउन सक्नुहुन्छ । आईफन्नीकाे प्रयाेग गर्न थालेपछि यसबाट रमाइला गिफ, भिडियो र मिमहरुको आदत पर्नेछ । कमेन्टमा साथीहरुलाई खोज्न र च्याट गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ ।साथमा तपाईंले आफ्नो मिम कलेक्सन समेत बनाउन सक्नुहुन्छ । यसमा १० मिलियनभन्दा बढीकाे युजर कम्युनिटी रहेकाे छ । यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
टम्ब्लर:टम्ब्लर लाेकप्रिय भिडियाे, फाेटाे र गिफ मेकर टुल हाे । यसमा तपाईंले नि:शुल्क टेक्स्ट पाेस्ट र ओरिजिनल अडियाे थप्न सक्नुका साथै स्पाेटिफाइजस्ता लाेकप्रिय स्ट्रमिङ सर्भिस जस्ता प्लेटेफर्मबाट गीतका अडियाे सर्च गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।गिफी:गिफी गिफ्सहरु भण्डारण हुने ठाउँ हो । यसले गिफ फर्म्याटमा मात्र काम गर्दछ । यसमा नि:शुल्क रूपमा गिफ, स्टिकर, छाेटाे भिडियाे खाेज्न र फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापचाट लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
बोनसमा वेबसाइट :अहिले मोबाइल प्रविधिको युगमा धेरै मिम जेनेरेटर एपहरु हुन्छन् । तर कुनै पनि एड डाउनलोड नगरी वेबमा मिम बनाउन चाहनेहरुका लागि समेत विभिन्न विकल्प छन् । जसमा आईएमजी फ्लिप, मिमजेनेरेटर डट नेट, कापविङ, मेक अ मिम आदि केही उदाहरण हुन् ।
श्री मनकामना माताले हामी सबैको कल्याण गरुन,हेर्नुहोस कार्तिक १५ गते शनिबार अक्टोबर ३१ तारीखको राशिफल
No Comments on श्री मनकामना माताले हामी सबैको कल्याण गरुन,हेर्नुहोस कार्तिक १५ गते शनिबार अक्टोबर ३१ तारीखको राशिफल
No Comments on मानिसको अनौठो रहर: निधारमा सिङ, जीउमा साढे ४०० प्वाल (भिडियो हेर्नुस्)
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, कार्तिक १५ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, कार्तिक १५ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on मुक्तीनाथ मन्दिरको १०८ धाराहरुको रहस्यमय खुलाशा ! शुद्ध मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ !
भगवान शिवको नाम ‘पशुपतिनाथ’ कसरी हुन पुग्यो ? ११ रोचक तथ्य: पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यो मन्दिर यस संसारमा रहेका २७५ ‘पादल पेत्र स्थलम्’ (शिवको पवित्र स्थान) मध्ये एक हो। पशुपतिनाथमा मूख्य रूपमा शिवजीको पूजा हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दा नै पशुपतिनाथालाई शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जौन, गाणपत, नाथ, सिख आदि प्रमुख सम्प्रदायका भक्तजनहरूले समान आस्था र श्रद्धाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्। साथै यस क्षेत्रमा विभिन्न सम्प्रदायका विभिन्न स्मारक एवम् पूजास्थल अखाडा पनि रहेका छन्।
आजको धर्म अङ्कमा हामी तपाईँहरूलाई जन्मदेखि मृ’त्यु सम्मका सबै संस्कार सम्पन्न गरिने नेपालको यस पावन स्थलको बारेमा केहि रोचक तथ्यहरूको बारेमा जानकारी दिन गैरहेका छौँ।१. बागमती जिल्लाको का.म.पा. वडा नं. ८ मा बागमती नदीको किनारमा रहेको यो मन्दिर २४० हेक्टरको (४,७९२ रोपनी) जग्गामा फैलिएको छ।२. पशुपतिनाथको मन्दिर सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत ‘यूनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रको सूची’मा (UNESCO World Heritage Site) पर्दछ। सन् १९७९ मा यूनेस्कोले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो।
भगवान बिष्णुको अवतारको छोटो अनि रोचेक गाथा …हेर्नुहोस्
No Comments on भगवान बिष्णुको अवतारको छोटो अनि रोचेक गाथा …हेर्नुहोस्
सनकादिक ऋषिहरु ले रिशाएर भने, ‘भगवान विष्णुसङ बसेर तीमी हरुमा घमन्ड आएको छ र घमन्डी हरुको वास बैकुंठ मा हुन सक्दैन। यस कारण हामी तिमि हरु लाई श्रा प दिन्छौ कि तीमी हरु पाप योनि मा जाउ र आफ्नो पाप को फल भोग’। यस्तरी श्रा प दीईेको मा जय र विजय डराएर ऋषि हरु को चरण मा परे माफी मांगन थाले।अनी त्यती खेर नै भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी माता र आफ्न समस्त पार्षद हरुका साथ ऋषि हरु का स्वागत का लागी आउनु भयो। भगवान विष्णु ले ऋषि हरु लाई भने, ‘यी जय र विजय नाम का मेरा पाले हरु हुन। यीनी दुबै ले आफ्नो अहंकारी बुद्धि को कारण ले गर्दा तपाई हरुको अप मान गरेर अप राध गरेका छन। तपाई हरु मेरा प्रिय भक्त हुनु हुन्छ र यीनी हरुले तपाई हरुको अवज्ञा गरेर मेरो पनी अवज्ञा गरेका छन। यीनी हरुलाई श्रा प दीएर तपाई हरुले राम्रो कार्य गर्नु भएको छ। यस कारण तपाई हरु मलाई माफ गर्नुहोस।’
भगवान का उक्त मधुर वचनले गर्दा ऋषि हरुको रिस शांत भयो। भगवान को यस्तो उदारता बाट ऋषि हरु अति प्रशन्न भए र भने, ‘तपाई धर्म को मर्यादा राखन का लागी ब्राह्मण हरु को यती धेरै आदर गर्नु हुन्छ। हे नाथ! हामी हरुले यी निरपराध पाले हरु लाई रि स र आ बेग मा अाएर श्रा प दीयौ, यस का लागी हामी क्षमा चाहन्छौ। हजुर लाई उचित लागदछ भने यीनी पाले हरुलाई क्षमा गरेर हाम्रो श्रा प बाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।’भगवान विष्णु ले भन्नु भयो, ‘हे ऋषिगण हरु! हजुर् हरुले जुन श्रा प दिनु भएको छ त्यो मेरो प्रेरणा ले नै भएको हो।
यी नी हरु अवश्य पनी उक्त सजाय का भागीदार हुन। यी नी हरु दैत्य माता अदिति को गर्भ मा गएर दै त्य वंश मा जन्म लीनेछन र म द्वारा यीनी हरुको सं हार हुनेछ।यीनी हरु म सङ श त्रुभाव राख्दा राख्दै पनी मेरो नै ध्यान मा लीन रहनेछन। म द्वारा यीनी हरुको सं हार भैइसकेपछी यी नी हरु फेरि यस धाम मा फिर्ता अाउनेछन।भनिन्छ की यीनीइ हरु नै पछी गएर हिरण्याक्ष र हिरण्याकश्यिपु, रावण र कुंभकर्ण का रूप मा प्रसिद्ध भए जस्को अंत गर्न का लागी भगवान विष्णुले वराह अवतार, नृसिंह अवतार, राव अवतार लीएका थीए।
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको भ्रमण आउनु ठिक कि बेठिक आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस
No Comments on भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको भ्रमण आउनु ठिक कि बेठिक आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस
पर्देसी निउज डट्कम नयाँ समाचारहरु भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको तीन दिवसीय भ्रमणका लागि यही कात्तिक १९ गते यहाँ आउने भएका छन्। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनरल नरवणेलाई नेपाल भ्रमणमका क्रममा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एक–अर्का देशको सैनिक प्रमुृखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा छ । रक्षामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जनरल नरवणेले औपचारिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानसेनापति थापासँग जनरल नरवणेले औपचारिक भेटवार्ता र छलफल गर्नेछन्।
यो पनि -बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए सबै प्रकारका क्यान्सर निको हुने ‘टी-सेल’
एजेन्सी– बेलायतका वैज्ञानिकहरुले सवै प्रकारका क्यान्सरको उपचार हुने ‘टी–सेल’ पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् ।उनीहरुले पटक–पटकको प’रीक्षणपछि टी–सेलले सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार सम्भव हुने दाबी गरेका हुन् ।बेलायतको कार्डिफ विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकको समूहले ल्या’बमा प्रो’स्टेट क्यान्सर, स्त’न क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर लगायत अन्य क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गर्दै उपचार स’म्भव भएको पुष्टि गरेका हुन् ।वैज्ञानिकले गरेको उक्त अध्ययन ‘नेचर इ’म्युनोलोजी’ नामक प्रतिष्ठित विज्ञान ज’र्नलमा प्रकाशित भएको छ ।
यो ल्या’बमा प’रीक्षण गरे पनि मानिसमा भने प’रीक्षण नगरिएको बताएका छन् ।अनुसन्धानकर्ताले यसमा ‘असाधारण सम्भावना’ रहेको बताउँदै मानिसमा लाग्ने सबै प्रकारका क्यान्सर निको हुने दा’बी गरेका हुन् ।जीवको प्र’तिरक्षा प्र’णाली उसको शरीरमा हुने सङ्क्रमणवि’रुद्धको प्राकृतिक प्र’तिरक्षा रहेको र यसले क्या’न्सरगुण भएका को’षलाई पनि आ’क्रमण गर्ने अनुसन्धानको नि’ष्कर्ष छ ।का’र्डिफ विश्वविद्यालका अनुसन्धादाताले मानिसको र’गतमा एक विशेष टी–सेल भेटेका छन् । जसले विगतदेखिको खोज पूरा भएको उनीहरुको दाबी छ ।
No Comments on बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए सबै प्रकारका क्यान्सर निको हुने ‘टी-सेल’
९ वर्षको उमेर देखि गीत गाउन थालेका राजु परियारले कति कमाए ? दिए यस्तो सटिक जवाफ खेम र मधुको विवादमा पनि बोले (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on ९ वर्षको उमेर देखि गीत गाउन थालेका राजु परियारले कति कमाए ? दिए यस्तो सटिक जवाफ खेम र मधुको विवादमा पनि बोले (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on देखेको १० दिनमा नै पूरा हुन्छन् यस्ता सपनाहरु, हेर्नुहोस् के भन्छ शास्त्रले !